Ha moogaanin dokumenterigan: '10 sano oo uu la joogay Hayao Miyazaki' | Abuurista khadka tooska ah
Hayao Miyazaki waa agaasimaha Spirited Away iyo kaas oo la raacayay toban sano oo dhan dokumenteriga '10 sano ee Hayao Miyazaki. Mid ka mid ah halyeeyada nool ee animation-ka Japan iyo in filimadiisa si wanaagsan loogu qoray xusuusta muuqaalka ee malaayiin qof oo adduunka ah.
Documentary, kaas oo aan wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku soo dhowaanno maalinta mid ka mid ah sayidyadiinta animation oo aad ku aragto albaabka gudihiisa, mahadnaq hal filim sameeye ah oo isaga ku raacay shaqada oo abuuray astaamahaas iyo qorshayaasha soo saaray qaar ka mid ah filimada xiisaha leh ee xiisaha leh.
Dokumentari wuxuu na geynayaa 2008 Taas oo uu ku muujinayo Hayao Miyazaki dhamaan hal abuurka mid ka mid ah filimada ugu guulaha badan Boxoffice-ka taasna ma leh magac kale oo aan ahayn Ponyo oo ku yaal Cliff.
Taasi waa, waan awoodnaa nasiib u yeelo inaad wax ka ogaato dhammaan daqiiqadahaas Miyazaki wuxuu ku dhex maray abuurista mid ka mid ah filimadiisa ugu caansan. Iyo tan ugu fiican, waxaad ka heli kartaa aragtidaada xiriiriyeyaasha aan ku siineyno. Dabcan, waxay ku qoran yihiin Ingiriis, in kasta oo ay tahay dukumiinti garaaf ah oo gaar ah qof kasta oo doonaya inuu wax badan ka ogaado animator-ka weyn iyo agaasimeyaasha iyo sidoo kale farshaxanle.
Qaybta koowaad ee dokumenteriga: '10 sano oo uu la joogay Hayao Miyazaki'
Qaybta labaad: '10 sano oo uu la joogay Hayao Miyazaki'
Qaybta saddexaad ee docu: '10 sano oo uu la joogay Hayao Miyazaki'
Qaybta afraad: '10 sano oo uu la joogay Hayao Miyazaki'
Un dukumiinti ka shaqeeya dhiirrigelinta iyo inuu arko nolosha u dhow oo ah farshaxan yahan dhererkiisu yahay Miyazaki, marka waxaan kuu daayeynaa 4-ta qaybood si aad waqti fiican ugu hesho inaad ogaato waqtigiisa. Waxaan kaa tagnay cashuur maxaan qabanay dhalashadiisa 75aad sidaa darteed ma ilaawno isaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Documentary-ga '10 sano ee Hayao Miyazaki 'wuxuu shaqsi ahaan ku tusayaa agaasimaha Ruuxay Away